Rhinitis nke Allergic | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ijikwa mgbaàmà Hay
Ndụmọdụ kachasị mma maka ijikwa mgbaàmà Hay fever
“Hay fever” ma ọ bụ rhinitis nfụkasị oge ọ bụla na-emetụta ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa. Ihe a na-ahụkarị na mmalite oge opupu ihe ubi, ihe mgbaàmà hay na-etolite dị ka mmeghachi omume nke allergens (ihe na-akpata nfụkasị) na ikuku, ọkachasị na pollen na mmalite oge opupu ihe ubi.
Hay Ahụ Ọkụ Eme
Hay Ahụ Ọkụ Na-akpata Ọrịa Tozọ Isi Zere Ha.
Ọ nweghị ụzọ a nwapụtara iji zere ịba ọkụ, ma ị nwere ike igbochi ihe mgbaàmà nke ịgwọ ọrịa site na ịzere ihe ọkụkụ hay, na-amalite mmeghachi omume gị.
Ọ bụ ezie na ihe akaebe ahụ edobeghị anya, ndị dọkịta chere na iwelata nwatakịrị ikpughe ihe ndị na - akpata nfụkasị ahụ dị ka obere uzuzu nwere ike inye aka gbuo oge ma ọ bụ gbochie ikesa anụ ahụ.
Otu ọkụ ọkụ si emetụta ahụ
Hay fever? Kedu ihe ọ bụ?
Hay fever ma ọ bụ dị ka amara ya, Allergic Rhinitis, na - apụta mgbe sistem gị ji alụso ọrịa ọgụ na - emetụta ikuku dị na ikuku ị na - eku ume - ị nwere ihe nfụkasị maka ha. Ihe ahụ gị na - alụso ọrịa ọgụ na - alụso ihe dị n'ahụ gị ọgụ, na - akpata mgbaàmà ndị dị ka imi na imi imi.
Shoplọ ahịaFreeMart Siaga
Siaga ™ bụ akwụkwọ ji ewepụta ahịhịa atọ dị ezigbo mkpa; Chaga Mushroom, Black Cumin Mkpụrụ na Licorice Root.